Soo-saareyaasha & Alaabada Alaabada - Warshadaha Alaabada Shiinaha
24 saacadood x 7 maalmood
Ku saabsan GUBT
Waa maxay sababta GUBT
VSI Xidho Qaybo
VSI Xidho Qaybaha (Qaybaha Rotor)
Barmac VSI Orange RC rotor taxane
RC840 ROTOR, rotors-yada cusub ee taxanaha liinta waxay si weyn u wanaajin karaan waqtiga wax soo saarka iyagoo kordhinaya qeyb nolosha ka mid ah iyo dayactir dhaqso ah.
GUBT waxay siisaa manganese-steel cone liners, kuwaas oo ku habboon jajabka jajabka iyo qalabka wax lagu jajabiyo.
GUBT waa khabiir ku takhasusay suuq geynta qalabka wax lagu jajabiyo, daboolkiisana qaybo ka mid ah qalabka wax lagu jajabiyo ee kaydka ayaan la mid noqon karin.
GUBT waxay bixisaa daamanka daamanka oo laga sameeyay bir manganese ah, taas oo ku habboon jajabka daamanka kala duwan ee adduunka. Bixi qaybo iyo taageero farsamo ee macdanta, wadarta, iyo dib-u-warshadaynta warshadaha ka dib!
GUBT waa khabiir ku takhasusay suuq geynta dambe oo loogu talagalay burburayaasha daanka, iyo baahinta qaybaha jajabka daamanka ee keydku waa mid aan la mid noqon karin.
GUBT waa hogaamiye caalami ah oo ka tirsan qaybta VSI kadib. Waxaan haynaa injineero xirfadlayaal ah oo ku jira qaybta VSI waxaanan galinay waqti badan iyo tamar si aan ugu horumarino tikniyoolajiyadda VSI si markaa soosaarka waxsoosaarka ee GUBT ee VSI PARTS uu usii socdo si xowli ah. Marka la barbardhigo alaabada guud ee VSI ee suuqa, alaabada GUBT ee VSI waxay leeyihiin faa iidooyin gaar ah, oo ay kujiraan dusha sare, cabir sax ah, iska caabbinta dharka sare, iyo nolol duug ah.
Ku tiirsanaanta waayo-aragnimada wax-soo-saar ee aadka u guuleysta, khibradda, iyo xasilloonida tayada ee goobta VSI, GUBT waxay ujeedadeedu tahay inay ka caawiso macaamiisha inay yareeyaan kharashyada, ay kordhiyaan helitaanka qaybaha, yareeyaan waqtiga dhimista, iyo inay bixiyaan adeeg ka sii iibka ka dib.
GUBT wuxuu siiyaa Liner HIS ka sameysan bir manganese ah, chromium aad u sarreeya, iyo birta Hardox, oo ku habboon burburka saamaynta kala duwan ee adduunka. GUBT waxay siisaa qaybo iyo taageero farsamo macdanta, wadarta, iyo warshadaha dib u warshadaynta ka dib!
Ku tiirsanaanta khibrada wax soosaarka ee aadka u guuleysatay, khibrada, iyo xasiloonida tayada ee goobta HSI, GUBT waxay ujeedadeedu tahay inay ka caawiso macaamiisha inay yareeyaan kharashyada, ay kordhiyaan helitaanka qeybaha, yareeyaan waqtiga dhimista, iyo inay bixiyaan adeeg ka wanaagsan iibka kadib.
GUBT waa hogaamiye caalami ah oo ku takhasusay warshadaha wax lagu rido. Waxaan haynaa koox injineero xirfad yaqaan ah oo waqti badan iyo tamar galiyay sidii aan u balaarin lahayn qalabkeena wax lagu rido.
Ku tiirsanaanta khibradaha sannadaha ee mashiinka la xareeyay iyo khibrad wax soo saar oo guuleysata, khibrad, iyo xasiloonida tayada ee warshadaha, GUBT waxay ujeedadeedu tahay inay ka caawiso macaamiisha inay yareeyaan kharashyada, kordhiyaan helitaanka qaybaha, yareeyaan waqtiga la joogo, iyo inay bixiyaan adeeg ka wanaagsan iibka kadib.
Cinwaanka: Dhismaha4, 486 Guanghua wadada 3aad ee bariga, Qingyang, Chengdu, Sichuan, 610031
Isniin.-Sun. : 7 * 24
Saxanka weelka, Concave, Mantle, saxanka saxanka, saxanka dhabanka, baarka afuufa, saxanka saafiga ah, Rotor TIp, saxanka godka, Feed Eye Ring, Quudinta Tube, saxanka quudinta, Saxanka dharka hoose ee kore ee kore, Rotor, Shaft, Main usheeda dhexe, Shaft Sleeve , Shaft Cap Swing Jaw IWM
Ma u baahan tahay la-tashi?
Noo soo dir fariin, dhawaan ayaan kula soo xiriiri doonaa.